Jaguar ကတ်ကြေး Jaguar ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက်ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ပင်မစာမျက်နှာ / Jaguar ဆံပင်အလှပြုပြင်ရေးကတ်ကြေး / 1 ၏စာမျက်နှာ 5
Jaguar Jay2Triple ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး Set
Jaguar Pre Style Relax P Hairdressing Scissor Set ဖြစ်သည်
အကြောင်းပို Read Jaguar ဆံပင်အလှပြုပြင်ရေးကတ်ကြေး
အဆိုပါ Jaguar စီးရီးများပါဝင်သည်:2ဇေ ၂, အကြိုပုံစံ, အဖြူရောင်လိုင်း, အနက်ရောင်လိုင်းနှင့် ရွှေလိုင်း မော်ဒယ်များ
အတွင်း Jaguar ကတ်ကြေးများစွာရှိသည်။ Jay 2, Pre Style နှင့် White Line ကဲ့သို့သောစုဆောင်းမှုများစွာရှိသည်။
ယင်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမို Read Jaguar ကတ်ကြေးတံဆိပ် ဒီမှာ ScissorHub မှာ!
၏မူလစျေးနှုန်း Jaguar ကပျကြေး
ဂျာမနီကကတ်ကြေးတွေရောက်လာတဲ့အခါငါတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေအများကြီးရှိတယ် "jaguar ကတ်ကြေးရဲ့မူလစျေးနှုန်း? "
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနပြုပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် Jaguar ဂျာမနီရှိဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများသည်ဈေးသက်သာသည်။
အဘယ်အရာကိုမူရင်းစျေးနှုန်းသြစတြေးလျရဲ့လက်ရှိစျေးနှုန်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစေသည် Jaguar ကတ်ကြေးလား။
သွင်းကုန်ခွန်၊ ပို့ကုန်၊ အမြတ်နှင့်မာဂျင်များသည်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်စေသည်။
ဂျေး2- တစ်ပိုဒ်လျှင် $ 50
(ပါဝင်ပါသည်: Jay2 ဖြတ်တောက်ခြင်း နှင့် Jay2 Thinning အစုံ။ အရွယ်အစား - ၄.၅ ၅ ၅.၅ ၆ နှင့်အထက်)
အကြိုပုံစံ - အပိုင်းအစလျှင် $ 60
(ပါဝင်ပါသည် အကြိုပုံစံ Ergo နှင့် အကြိုစတိုင် Relax ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာခြင်း။ အရွယ်အစား: 4.555.566.5)
အဖြူရောင်လိုင်း - အပိုင်းအစနှုန်း $ 80
(ပါဝင်ပါသည် ဖဲ, Satin Plus အား, Satin Plus E, Charm, Smart, JP၊ Silver ICE, Sterling, Pastell Plus, CM 40 နှင့် JP 10 တို့ဖြစ်သည်။ အရွယ်အစား - ၄.၅ ၅ ၅.၅ ၆ ၆.၅ နှင့်အထက်)
ငွေလိုင်း - အပိုင်းအစလျှင် $ 200
(ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းပါဝင်သည်, ကျြောစောခွငျး, CJ4 Plus အား, CJ5, CJ ၃, အကောငျးဆုံး, ခုံ CSနှင့် CJ4Plus အား။ အရွယ်အစား - ၄.၅ ၅ ၅.၅ ၆ ၆.၅ နှင့်အထက်)
ရွှေလိုင်း - အပိုင်းအစလျှင် $ 300
(ပါဝင်ပါသည် လမ်းကျဉ်းတိတ်ဆိတ်စွာနေ ရွှေဝါ, Xenox, စိန်အီး, စိန်နှင့် စိန်အီးလက်ဝဲ။ အရွယ်အစား - ၄.၅ ၅ ၅.၅ ၆ ၆.၅ နှင့်အထက်)
အနက်ရောင်လိုင်း - တစ်ယူနစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၅၀၀
(ပါဝင်ပါသည် Vision MC သံမဏိ, Synergy ဒီဇိုင်း MC သံမဏိနှင့် ယူရိုနည်းပညာဒီဇိုင်း MC သံမဏိ။ အရွယ်အစား - ၄.၅ ၅ ၅.၅ ၆ ၆.၅ နှင့်အထက်)
အဆင်မပြေတာကငါတို့အားလုံးဂျာမနီမှာမနေဘူး၊ မဟုတ်ရင်အရည်အသွေးမြင့်တဲ့စျေးပေါတဲ့စျေးနှုန်းတွေကိုကျမခံစားနေရတယ် Jaguar ကတ်ကြေး။
ဤမေးခွန်းသည်သင်၏စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏မေးခွန်းများကိုအဖြေပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည် Jaguar ကတ်ကြေး! အပြည့်အဝကိုရှာဖွေပါ Jaguar အောက်ကစီးရီး။
သင်၏အတွက်မှန်ကန်သောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးကိုရှာခြင်း Jaguar ကတ်ကြေး။
ဂျပန်ကတ်ကြေးများစွာနှင့်မတူသည်မှာ Jaguar ညှပ်တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်နှစ်ဆ bevel အစွန်းဓါးရှိသည်။
Jaguar Solingen ကတ်ကြေးများကိုခရိုမီယမ်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်၏နားလည်သောချွန်ထက်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း Jaguar ကတ်ကြေးလား။
လေ့ကျင့်ထားသောထက်မြက်သောပညာရှင်များသည်နားလည်ကြလိမ့်မည် Jaguar သြစတြေးလျကတ်ကြေး။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့သွေးကိုကြည်လင်စေသင့်တယ် Jaguar လျင်မြန်စွာနဲ့အလွယ်တကူကတ်ကြေး။
နောက်ထပ်ဖတ်ရန်: အကောင်းဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွက်ကတ်ကြေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်း Jaguar
Are Jaguar ကတ်ကြေးဘယ်ကောင်းလဲ?
၎င်းတို့သည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးထုတ်လုပ်မှုရှိသောအကောင်းဆုံးကတ်ကြေးအချို့ဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဆံပင်ညှပ်ညှပ်များကိုပြုလုပ်ကြသည်။
Jaguar ကတ်ကြေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများသည်အမြဲတမ်းကြယ် ၅ ပွင့်ဖြစ်ပြီးဖောက်သည်ကျေနပ်မှုအပြည့်ရှိသည်။
၏အရည်အသွေးမြင့်စစ်ဆေးမှုများ Jaguar ကတ်ကြေးထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်သည်အတွဲတစ်ခုစီတိုင်းကိုနောက်ဆုံးအဖြစ်ဖြတ်တောက်ကြောင်းသေချာစေသည်။
အကောင်းဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုသွားပါ Jaguar သူတို့ရဲ့ပရီမီယံအရည်အသွေးနှင့်တတ်နိုင်စျေးနှုန်းများအတွက်ကတ်ကြေး။
ဤသည်ကို Jaguar ယူအက်စ်အေ၊ ကနေဒါ၊ Australiaစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်တို့တွင်အကောင်းဆုံးကိုပြသည်။
Jaguar ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးသည်လူကြိုက်များပြီးထိုဒေသများအတွက်သင်ဒီမှာ ၀ ယ်နိုင်သည်။
Jaguar ကတ်ကြေး။ USA
ဤတွင်အားလုံးအပေါငျးတို့သကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျဉ်းချုပ်ကိုဖြစ်ပါတယ် Jaguar စုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်ရရှိနိုင်ကတ်ကြေးမော်ဒယ်များ။ တစ်ခုချင်းစီကို Jaguar ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးပုံစံသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများ၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်သင့်တော်သည်။
JAG ၀၃၅၀ $ 150-250 သွားပုံစံ (၂၈) လုံးပါ ၀ င်သောကတ်ကြေးကပ်ပါးမှုပုံစံ ၅.၅ လက်မ Ergo ။
JAG ၀၃၅၀ $ 150-250 သွားပုံစံ ၂၈ ခုပါသောပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကို ၅.၅ လက်မလျှော့အနားယူထားသည်။
JAG ၀၃၅၀ $ 150-250 လက်ဝဲဘက် (ဘယ်) လက်ချောင်း ၃၉ ခုပါသောပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုစတိုင်ကျစွာအနားယူပါ။
JAG 4750, JAG 4755 နှင့် JAG 4760 $ 150-250 အဖြူရောင် Satin Plus ပါးလွှာသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူ။
JAG ၀၃၅၀ $ 150-250 White Line Satin Plus E သည်ဆံပင်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုညှိပေးသည်။
JAG ၀၃၅၀ $ 200-300 White Line Charm သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပါးလွှာသောကတ်ကြေးများ။
JAG ၀၃၅၀ $ 200-300 White Line Smart သည် Jaguarပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုင်တွယ်ရန်အကောင်းဆုံး။
JAG ၀၃၅၀ $ 200-300 Jaguarလူကြိုက်များသော JP 10 (JP10) သည်စီးပွားရေးအရဆံပင်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုညှိပေးသည်။
JAG ၀၃၅၀ $ 200-350 အဆိုပါ Sterling ပါးလွှာကတ်ကြေးတစ်ခု ergonomic လက်ကိုင်နှင့်သွား 40 ရှိပါတယ်။
JAG ၀၃၅၀ $ 200-350 Left-Handed (LEFTY) JP 10 ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများသည်အံသွား ၃၈ ခုနှင့် ၅.၂၅ လက်မအရွယ်ရှိသည်။
JAG ၆၅၁၅၀၊ JAG 65155 နှင့် JAG 65160 $ 300-400 Jaguar ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းကတ်ကြေးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဂျာမန်သံမဏိ၊ ergonomic ဒီဇိုင်းနှင့်အချောသပ်စွာပြုလုပ်ထားသည်။
JAG ၀၃၅၀ $ 300-400 Jaguar Grace တွင်သွား ၄၀ နှင့် ၅.၅ လက်မအရွယ်အစားရှိသည်
JAG ၀၃၅၀ $ 300-400 Jaguar Fame ပါးလွှာသောကတ်ကြေး သွား ၄၂ လုံးနှင့် ၅.၇၅ "အရွယ်အစားရှိသည်။
JAG ၀၃၅၀ $ 300-400 Jaguar CJ4 ပါးလွှာသောကတ်ကြေး သွား ၄၂ လုံးနှင့် ၅.၇၅ "အရွယ်အစားရှိသည်။
JAG ၀၃၅၀ $ 300-400 Jaguar CJ5 (CJ 5) ကတ်ကြေး ငွေလိုင်းစုဆောင်းမှုထဲကအကောင်းဆုံး ergonomics ပါရှိသည်။
JAG ၀၃၅၀ $ 300-400 အဆိုပါ Jaguar CM36 ပါးလွှာသောကတ်ကြေးတွင်အံသွား ၃၆ ခုနှင့်အမြင့်မှ ၅.၂၅ လက်မရှိပြီးအစွန်အဖျားမှကိုင်တွယ်သည်အထိ။
JAG ၀၃၅၀ $ 300-450 Left-CJ4Plus ပါးလွှာတဲ့ကတ်ကြေးမှာသွား ၄၀ နဲ့အမြင့်မှ ၅.၂၅ လက်မအရွယ်ရှိပါတယ်။
JAG ၀၃၅၀ $ 600-900 အဆိုပါ Gold Line Lane ကတ်ကြေးအကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်မှုများအတွက်ဂျာမန်သံမဏိနှင့်ချွန်ထက်သောဓါးများကိုအသုံးပြုသည်။
JAG ၀၃၅၀ $ 600-900 အဆိုပါ ရွှေလိုင်းလိန်းပါးလွှာ ကတ်ကြေးများတွင်အံသွား ၃၃ ခုနှင့်အရှည်တစ်ခုမှ ၅.၇၅ လက်မရှိသည်။
JAG ၀၃၅၀ $ 600-900 Silence ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများတွင်အံသွား ၃၄ ခုနှင့်လက်ကိုင်ကျသောဒီဇိုင်းရှိသည်။
JAG ၀၃၅၀ $ 600-900 အဆိုပါ Goldwing ပါးလွှာသောကတ်ကြေး34 သွားနှင့် 5.75 "၏အရွယ်အစားပါဝင်သည်။
JAG ၀၃၅၀ $ 600-900 အဆိုပါ Diamond CC39 ပါးလွှာသည် သွား ၃၉ လုံးနှင့်အရွယ်အစား ၅.၅ လက်မရှိသည်။
JAG 20150, JAG 20155 နှင့် JAG 20160 $ 600-900 Diamond Scissors များသည်ပရီမီယံသံမဏိ၊ ချွန်ထက်သောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ရိုးရာလက်ကိုင်ဒီဇိုင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
JAG ၀၃၅၀ $ 600-900 Diamond Thinning Shears တွင်ရိုးရာလက်ကိုင်နှင့်ချွန်ထက်သောပါးလွှာသောသွားများပါရှိသည်။
JAG ၀၃၅၀ $ 600-900 အဆိုပါ Diamond E လက်ဝဲပါးလွှာသောကတ်ကြေးသွား ၃၉ လုံးနှင့် ၅.၅ လက်မအရွယ်အစားရှိသည်
JAG 941525 နှင့် JAG ၀၃၅၀ $ 1200-2000 Vision MC သံမဏိတွင်ထောင့်ကွင်းထောင့်များ၊ အကောင်းဆုံးэрဂonomicsနှင့်အပြောင်ဆုံးခုံးအနားများရှိဂျာမန်ကတ်ကြေးများအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
JAG 97525-1 နှင့် JAG 97575-1 $ 1200-2000 Euro-Tech ဒီဇိုင်း MC သံမဏိသည် Micro Carbide ဂျာမန်သံမဏိ၊ ခုံးဓားများနှင့်ပရီမီယံ offset ergonomics ကိုအသုံးပြုသည်။
Solingen, ဂျာမနီဘာတွေလဲ Jaguar ကတ်ကြေးလား။
အများဆုံးမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအနက်တစ်ခုမှာ "ဆလင်ဂင်ဆံပင်ကတ်ကြေးများမှာအဘယ်နည်း" ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် bevel အစွန်းဓါးပါရှိပါတယ်
ကတ်ကြေးများသည် ၄.၅ လက်မမှ ၇ လက်မအထိရှိသည်
စျေးနှုန်းများသည် ၉၉ ဒေါ်လာမှဒေါ်လာ ၁၅၀၀ အထိရှိသည်
Solingen သည် ၁၉၂၇ ခုနှစ်မှစ၍ ကတ်ကြေးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
အကောင်းဆုံးဂျာမန်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတံဆိပ်များအနက်မှ Solingen ညှပ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျတွင်ဆိုလင်ဂင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုလူသိများသည်။Jaguar"ညှပ်, သူတို့နှစ် ဦး စလုံးတတ်နိုင်နှင့်ဂုဏ်သတင်းဖြစ်ကြသည်။